Midowga Yurub oo ka codsatay DKMG inay hagaajiso nidaamka Cadaaladda | raascasayrmedia.com
← TACSI MARXUUNKA MAXAMED YUUSUF (XAAJI BOODBOOD)
Banaanbax la’isku rasaaseeyay oo ka dhacay Muqdisho →
April 15, 2011 · 7:29 pm
Midowga Yurub oo ka codsatay DKMG inay hagaajiso nidaamka Cadaaladda
Ururka Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya ka codsatay inay hagaajiso nidaamka Cadaalada Soomaaliya si burcad badeeda Kenya ku xiran loo keeno Soomaaliya islamarkaana lagu Maxkamadeeyo.
Lodewijk Briet oo hogaaminaya Wafdi sare ka tirsan Midowga Yurub oo booqasho ku tagay dalka Kenya ayaa waxaa uu u sheegay Wargayska The-Standard in loo baahanayhay in aad loo hagaajiyo Xabsiyada ku yaala Soomaaliya si loo suurta galiyo in burcad badeeda la keeno dalka Soomaaliya.
Safiirka Soomaaliya Kenya u fadhiya dalka Kenya Max’ed Cali Ameerilo ayaa dhowaan waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay leedahay nidaam sax ah iyo goobo ku haboon in wax looga qabto burcad badeeda Soomaalida.
Sidoo kale Safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Etienne de Poncins ayaa waxaa uu sheegay in Kenya ay rajeyneyso in kiisaska burcad beeda ay wax ka qabato hase ahaatee ay jiraan walaac ku aadan qaabka Kenya ay u baari karto burcad badeeda aan lagu cadeyn in ay faraha kula jireen falal burcad badeednimo ah.
Inka badan 200- boqol oo burcad badeeda Soomaali ah ayaa waxaa ay ku xiran yiin dalka Kenya kuwaasi oo aan wali lagu qaadin dambiyadooda, waxaana arintaani ay imaanaysaa xili maxaabiis badan oo ku xiran xabsiga Shimo la Tewa ay dhowaan cadsteen in loo celiyo Soomaaaliya si loogu Maxkmadeeyo.